युगान्डामा २०० भन्दा बढी कैदी जेलबाट फरार, तीन जनाको मृत्यु – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /अन्तर्राष्ट्रिय/युगान्डामा २०० भन्दा बढी कैदी जेलबाट फरार, तीन जनाको मृत्यु
युगान्डा / युगान्डाको उत्तरपूर्वी जिल्ला मोरोटोको जेलबाट कम्तीमा २१९ कैदी फरार भएको स्थानीय जेलका प्रवक्ताले बिहीबार बताएका छन् । युगान्डा कारागार सेवाका प्रवक्ता फ्रान्क बाइनका अनुसार स्थानीय समय अनुसार बुधबार जेल तोडेर भाग्ने क्रममा कम्तीमा सात बन्दीहरुलाई पुनः नियन्त्रणमा लिइएको छ र तीन जना मारिएका छन् । मारिएका तीन कैँदीले बिहीबार नै नियन्त्रणमा आएपछि पुनः भाग्न बल प्रयोग गरेपछि भएको भिडन्तमा उनीहरू मारिएका मोरोटो सहरको सिंगिला जेल प्रशासनले जनाएको छ ।
बाइनले भने, “जेल प्रशासन, सेना तथा प्रहरीले फरार कैँदीहरूको संयुक्त रूपमा खोजी गरिरहेका छन् ।” “बुधबार रातिदेखि सुरक्षाकर्मीले हवाई गस्तीलाई रोकी पैदल गस्तीहरूलाई बढाएका छन् । खोजी जारी छ यस साताभरमा उनीहरू पत्ता लाग्नेछन्,” उनले भने ।
प्रवक्ता बाइनले भने, “ फरार तथा मारिएका अधिकांश कैदीहरूलाई अवैध रूपमा हतियार राखेको अभियोगमा जेलमा राखिएको थियो । उनीहरूसँगबाट १४ थान बन्दूक र दर्जनौँ गोली तथा केही विस्फोटक पदार्थ बरामद गरिएको छ ।”
गत मार्चमा उत्तर पश्चिमी जिल्ला औरामा कैदीहरूले जेलको घेरा तोडी भाग्न खोज्दा भएको दङ्गामा तीन कैदीको मृत्यु भएको थियो भने छ घाइते भएका थिए । तर कैँदीहरूको भाग्ने प्रयास सुरक्षाकर्मीले विफल पारेको थियो ।
पाथिभरा माताले हामी सबैको मनोकांक्षा पुरा गरुन,आज मंसिर १० गते बुधबार ,यस्तो छ तपाईको राशिफल !
रुसले भारतलाई १० करोड डोज कोरोना खोप बेच्दै..!
अमेरिकाको ओहायोस्थित घरमा आगलागी हुँदा ५ नेपालीको मृ,x त्यु,